A na-ekwupụta Oppo A55 5G na Dimensity 700 na gam akporo 11 | Gam akporosis
A mara Oppo A55 5G na Dimensity 700 na gam akporo 11
Oppo ekwuputala ngwaọrụ ọhụrụ maka ahịa mpaghara n'okpuru usoro A55, ekwentị ejiri na etiti etiti na ntinye 5G. Ọnụ ahụ na-aghọ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị na-achọghị ịme nnukwu ego ma nwee ama nwere ọtụtụ nkwa.
El Oppo A55 5G bụ nzọ doro anya na akụkụ nke ntinye ntinye, bu ihe nlere di n’elu Oppo A93 5G n'usoro nke ike na n'okpuru Oppo Reno5 usoro. Na agbanyeghị nke a, onye nrụpụta ahụ na-ebupụta ya n’ọnọdụ kwesịrị ekwesị iji nye onye ọrụ ahụ ọnụ ya na ụdị nke gam akporo 11 kachasị ọhụrụ.
1 Oppo A55 5G, ngwaọrụ iji tụlee
2 Batrị dị elu
Oppo A55 5G, ngwaọrụ iji tụlee
Companylọ ọrụ ahụ kpebiri imezu a 6,5-anụ ọhịa panel na HD + mkpebi, a na-edebe ọnụego ume ọhụrụ na ọkọlọtọ 60 Hz. Na ihe atụ a, bezels na-egosipụta oke, enyo gosipụtara na gburugburu 88%, na-ahapụ obere etiti na ala na elu.
I kpebiela itinye mgbawa mara nke ọma Dimensity 700 6-isi na ọsọ nke 2,2 na 2,0 GHz, 6 GB nke RAM na nchekwa nke 128 GB. Ọ bụrụ na ohere gwụrụ, a ga-enwe oghere iji tinye kaadi SD nke ihe ruru 1 TB iji chekwaa ụdị ọdịnaya niile.
El Oppo A55 5G na azụ ọ na-egosi lenses atọ, nke mbụ bụ 13 megapixel f / 2.2, nke abụọ bụ 2 MP f / 2.4 macro na nke atọ bụ 2 MP f / 2.4 bokeh sensor. Ihe mmetụta ihu na-abata na nkwụsịtụ na 8 megapixels, zuru oke iji were foto dị mma, vidiyo ma jiri ya maka ọgbakọ mkparịta ụka vidiyo.
Batrị dị elu
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụdị ụdị Oppo A, ihe dị mkpa dị na batrị, ọ na-eji sel 5.000 mAh, ọ na-ekwe nkwa nnwere onwe dị mkpa. Oppo A55 5G maka ịrụ ọrụ nwere nhọrọ nke ịchekwa batrị mgbe a bịara n'iji ekwentị mgbe ọ dara n'okpuru 40% ekele maka ColorOS.
Batrị na-akwụ ụgwọ bụ 10WỌ bụghị ngwa ngwa zuru ezu, ma ọ ga-ewe ihe karịrị otu awa kwa ụgwọ, ọ bụ ikekwe otu n'ime isi ihe ọjọọ na ekwentị a. N'aka nke ọzọ, ihe kachasị mma bụ na anyị ga-enwe mkpanaka maka ụbọchị dum na-enweghị ịgba ụgwọ ya kwa ụbọchị.
Oppo A55 5G ga-abịa na Dimensity 700 bịarutere na mgbaji 5G NR nnyefe data ọsọ ọsọ, enwere ike iji ya na ndị ọrụ ọ bụla. Ọ na-agbakwụnye Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Minijack na GPS dị ka ọkọlọtọ, na ọ na-enye akụkụ akara mkpisiaka n'akụkụ maka ịkpọghe.
Banyere ngwanrọ, A55 5G biara na gam akporo 11 jiri mmelite maka ọnwa Disemba ma kwe nkwa ngwugwu mmelite maka ọnwa Jenụwarị gaa n'ihu. Ngwurugwu omenala bụ ColorOS 11.1 ma ọ na-eweta ọtụtụ atụmatụ na-agbakwunye ọtụtụ na ụdị a.
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD na mkpebi HD +
Nhazi MediaTek Dimens 700
Kaadị grafik Mali-G75 MP2
Nchekwa n'ime 128GB / Na-akwado MicroSD ruo 1TB
Gbanwee CAMERA 13 MP isi ihe mmetụta / 2 MP macro sensor / 2 MP bokeh sensor
N'ihu CAMERA Ihe mmetụta 8 MP
Njikọ 5G NR / Wi-Fi / Bluetooth 5.1 / Obere Jack
Mbibi na ibu ibu 163.9 x 75.7 x 8.4 mm / 186 gram
El A ga - edebe Oppo A55 5G na ndị na - ekesa ya Tmall na Suning na agba abụọ, acha anụnụ anụnụ na nwa na nhọrọ 6/128 GB. Ọnụ ego ọ bụla dị yuan 1.599, ihe dị ka euro 200 na mgbanwe na nnweta ya na mpụga China amaghị n'oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A mara Oppo A55 5G na Dimensity 700 na gam akporo 11
Oppo Reno5 Pro 5G igwefoto ka mma na mmelite ohuru
Etu esi eji Google Chrome dị ka ihe nchọgharị faịlụ na ngwaọrụ gam akporo